အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ နေ ရာ မှာ တ ခြား လူ သာ ဆို ရင် ဒီ လို အ ဖြေ ထွက် ပါ့ မ လား . . . ? မေး ခွန်း ပေါင်း များ စွာ ဖြေ ပါ ! - Real Gaming Myanmar
အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ နေ ရာ မှာ တ ခြား လူ သာ ဆို ရင် ဒီ လို အ ဖြေ ထွက် ပါ့ မ လား . . . ? မေး ခွန်း ပေါင်း များ စွာ ဖြေ ပါ !
အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ ပါ သုံး ဦး ကို လွှတ် ပေး လိုက် ပါ ပြီ တဲ့ ။
ဖမ်း မိ တဲ့ ဆေး ပြား တွေ က မူး ယစ် ဆေး ဝါး မ ဟုတ် လို့ ဓါ တု ဗေ ဒ ဝန် ရုံး က ပြန် ကြား ပါ သ တဲ့ … ။
လွတ်ွမြောက် လာ ပြီ ဆို တဲ့ အ တွက် အ ရမ်း ဝမ်း သာ ပါ တယ် ။
မေး စ ရာ မေး ခွန်း တွေ ရှိ လာ ပါ တယ် ။
မြန် မာနိုင် ငံ မှာ အ ပြစ် ရှိ တယ် မ ရှိ ဘူး ၊ မူး ယစ် ဆေး ဝါး ဟုတ် မ ဟုတ် မ သေ ချာ ဘဲ သ တင်း အ ရ ဆို တာ နဲ့ လူ ကြား သူ ကြား ထဲ သောက် ခွက် ရိုက် ပြီး ဖမ်း လို့ ရ တယ် ပေါ့ … အဲ့ ကိ စ္စ ကို ရှင်း ပြ ပါ ။
( ၁ ) လူ မြင် ကွင်း မှာ ဖမ်း ဆီး ရုံ တင် မ ဟုတ် ဘဲ မျက်နှာ နဲ့ ခေါင်း ကို ရိုက် ပုတ် ခေါ် ဆောင် ခြင်း
( ၂ ) မူး ယစ် ဆေး ဟုတ် မ ဟုတ် မ သေ ချာ ဘဲ ရောင်း ဝယ် ဖောက် ကား ပုဒ် မ အ ပါ အ ဝင် ပုဒ် မ တွေ တပ် ခြင်း
( ၃ ) အ ပြစ် မ ရှိ ဘဲ ဖမ်း ဆီး ချုပ်နှောင် ထား ခြင်း
( ၄ ) ဂုဏ် သိ က္ခာ ထိ ပါး နစ် နာ စေ ခြင်း ။
ဒါ တွေ နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ဘယ် သူ က တာ ဝန် ယူ မ လဲ ၊ ဘယ် လို တာ ဝန် ယူ မ လဲ ။
မှား ဖမ်း တာ… ဆော ရီး နော် ဆို တာ နဲ့ ရ မ လား … ။
အ ခု ကိ စ္စ က နာ မည် ကြီး အ ဆို တော် ဖြစ် နေ လို့ သာ Candy က Candy ဖြစ် တာ ။
ဒါ တောင် အ စ က ကက် တ မင်း ဆေး ပြား လို့ သ တင်း တက် သေး တယ် ။
အ ကယ် ၍ ဖြိုး ပြည့် စုံ နေ ရာ မှာ သာ မန် မျက်နှာ မွဲ လူ ငယ် တစ် ယောက် ဆို ရင် ရော Candy က Candy ပါ လို့ အ ဖြေ ထွက် ပါ့ မ လား ။
ကိုယ် က တော့ ဖြစ် တဲ့ နေ့ က တည်း က ဗီ ဒီ ယို ဖိုင် ကို ကြည့် ပြီး နည်း နည်း မှ မ ကျေ နပ် ဘူး ။
မူး ယစ် ဆေး ဟုတ် တာ မ ဟုတ် တာ အ သာ ထား ၊ မူး ယစ် ဆေး ပဲ ထား ဦး … ခု ခံ နေ တာ မ ဟုတ် ဘဲ ရန် ပြု နေ တာ မ ဟုတ် ဘဲ ရိုက်နှက် စ ရာ အ ကြောင်း တစ် ပြား သား ဖိုး မှ မ ရှိ ဘူး ။
အ ခု က မူး ယစ် ဆေး လည်း မ ဟုတ် ဘူး ဆို တာ အ ဖြေ ထွက် လာ ပြီး သ တင်း အ မှား ပေး တဲ့ သ တင်း ပေး ကို ဘယ် လို အ ရေး ယူ မ လဲ ။
မ သေ ချာ ဘဲ ဇွတ် ဖမ်း တဲ့ လူ တွေ ရော ၊ အ ထူး သ ဖြင့် ရိုး ရိုး မ ဖမ်း ဘဲ ရှယ် ဇွန်း တပ် ပြီး အ ခွက် ရိုက် ဖမ်း တဲ့ လက် စွမ်း ပြ ပု ဂ္ဂိုလ် ထူး ကြီး က ရော ဘယ် လို အ ထူး တာ ဝန် ယူ ပေး မ လဲ နား စွင့် ထား ပါ ရ စေ နော် … ။
ခေတ် ကို က ကော် ဖီ ဆိုင် ထိုင် ရင်း သ ကြား လုံး က အော် တို ကက် တ မင်း ဖြစ် ပြီး မျက် ခွက် ရိုက် အ ဖမ်း ခံ ရနိုင် တဲ့ ခေတ် ၊ မ ရ တော့ ဘူး … မ တ ရား တွေ ကြည် ညို နေ ပြီ ခြေ သ လုံး ဖက် မိ တော့ မယ်… အာားးးးးးး ။
Previous: မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီးသမိုင်း
Next: သီတင်း ကျွတ် မှာ ဝန် ထမ်း တွေ ကို ဗ လာ မ ပါ ကံ စမ်း မဲ ဖောက် ပေး ခဲ့ တဲ့ ခိုင်နှင်း ဝေ …